Wakiillada Uganda ee Bariga Afrika oo isku khilaafay in Ururkaas lagu daro Somaliya – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWakiillada Uganda ee Bariga Afrika oo isku khilaafay in Ururkaas lagu daro Somaliya
February 10, 2018 Cabdi nuur WARARKA MAANTA 0
Xildhibaannada Baarlamaanka Uganda ku matala Urur Goboleedka Bulshada Bariga Afrika ayaa ku kala qeybsamay in ururkaas lagu daro Soomaaliya.
Xildhibaannada qaar ayaa sheegay in Soomaaliya haddii lagu daro Ururkaas ay Al-shabaab ka faa’dieysanayaan islamarkaan weerarro ka geysanayaan Gobolka.
Susan Nakawuki oo ka mid ah Xildhibaannada diiddan in Soomaaliya lagu daro Ururkaas ayaa sheegay in haddii Soomaaliya loo furo sohdinta ay taas horseedeyso in Al-shabaab ay ka faa’ideystaan.
Laakiin Xildhibaan Fred Mukasa Mbidde,ayaa aaminsan in ururkaas haddii lagu daro Soomaaliya ay fududaaneyso dabagalka lagu sameyn karo AL-shabaab loogana saari karo Gobolka.
Shirka Ururka Bulshada Bariga Afrika ayaa dhamaadka Bishan waxaa uu ka dhacayaa Magaalada Kampala ee xarunta Dalka Uganda.
Soomaaliya ayaa codsi u gudbisay Maxda Urur Goboleedka Bulshada bariga Afrika iyada oo dooneysa in ay xubin ka noqoto Ururkan,waxaase ay dood u dhaxeysaa marti geliyayaasha Sanadkan ee Uganda.
Waddamada Xubnaha ka ah waxaa ka mid ah Burundi, Kenya, Rwanda, South Sudan,Tanzania, iyo Uganda,waxaana dowladda Soomaaliya ay dooneysaa in ay ku biirto Ururkan.
AKHRISO: Madaxweynaha Puntland oo shir ku casuumay Madaxda dowlad goboleedyada
AKHRISO: Hogaamiyaasha Siyaasadda Soomaalida oo kulankoodii Muqdisho maanta soo xirmayo & Warsaxaafadeed laga soo saaray
40,834 total views, 1,587 views today
40,834 total views, 1,587 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
40,907 total views, 1,587 views today
40,907 total views, 1,587 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
40,919 total views, 1,587 views today
40,919 total views, 1,587 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
40,944 total views, 1,588 views today
40,944 total views, 1,588 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
40,974 total views, 1,587 views today
40,974 total views, 1,587 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]